तपाईंको स्थानीय खोज र्याकिंग सुधार गर्दै - Semalt सल्लाह
हामी धेरै भ्यारीएबलमा फ्याक्टर गर्छौं जब हामी एसईओ मा र्यान्क गर्न को लागी प्रयास गर्छौं र एकपटक हामीले पसल सेटअप गरिसकेका छौं भने हाम्रो व्यवसायहरू बढाउँछन्। हामीले पत्ता लगायौं कि हाम्रो पछि एसईओको एक महत्त्वपूर्ण र अत्यधिक उपेक्षित पक्ष शायद स्थानीय एसईओ हो। किन यस्तो भएको? स्थानीय एसईओ मामिलाहरु किनकि ग्राहकहरु राम्रो उत्पादनहरु र उनीहरु को नजिकको सेवाहरु खोजिरहेका छन्। तिनीहरू सकेसम्म चाँडो जवाफहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुन चाहन्छन्।
हामीलाई तपाईंको वेबसाइट मद्दत गर्न मद्दतको लागि, हामी यस्तो प्रश्नहरू सोध्न मन पराउँछौं कि "के तपाइँको व्यवसायले तपाईको स्थानीय ग्राहकहरु तपाइँले प्रदान गरेको उत्पादन वा सेवाहरू खोज्दै छन् भने?" के तपाइँ आफ्नो ग्राहकहरु तपाइँको सबै स्थानीय प्रतिस्पर्धा मा तपाइँको व्यवसाय छान्ने लाग्छ?
यस पोष्टमा हामी तपाईलाई थाहा पाउनु पर्ने चीजहरूको र स्थानीय खोजीको लागि तपाईंको वेबसाइट र व्यवसायलाई अनुकूलित गर्ने तरिकाहरू सामना गरिरहेका छौं। यो सही प्राप्त गर्न, तपाईलाई एउटा रणनीतिक र लक्षित दृष्टिकोण आवश्यक पर्दछ जुन तपाइँको सामान्य SEO अभ्यासबाट थोरै विचलित हुन्छ।
व्यवसायहरू जुन आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू विरुद्ध जीतको आशा राख्दछन् उनीहरूले पहिले गुगलको खोज परिदृश्य भरिका सबै स्थानीय स consistent्केतहरू एकरुप र सहि छन् भनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। हामी आशा गर्दछौं कि जब तपाईं यो लेख पढ्दै जानुहुन्छ, तपाईंसँग आजको स्थानीय खोजी ल्यान्डस्केपको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनेछ र कसरी हामी तपाईंलाई यी वेबसाइटहरू स्थानीय एसईओ प्रदर्शन सुधार गर्न यी रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं।
हामी सुरु गर्नु अघि, स्थानीय एसईओ के हो पत्ता लगाउनुहोस् र किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ।
स्थानीय एसईओ के हो र यो किन फरक पार्छ?
स्थानीय खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन SEO को अर्को शाखा हो जुन वेबसाइटलाई स्थानीय खोजी परिणामहरूमा स्थानीय प्रयोगकर्ताहरू द्वारा फेला पार्न अनुकूलित गर्दछ। तपाईलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि मद्दतको लागि यदि तपाईले खोजी गर्नुभयो भनेः
मेरो नजिकका वकिलहरू
मेरो नजिक डाक्टरहरू
(शहरको नाम) मा रेस्टुरेन्ट
गुगलले खोज क्वेरी लिनेछ र स्थानीय रूपमा सान्दर्भिक प्रदर्शन परिणामहरू। यस तरिकाले, तपाई डाक्टर, रेस्टुरेन्ट, र वकिलसँग सम्पर्कमा हुन सक्नुहुनेछ धेरै लामो यात्रा नगरीकन।
स्थानीय एसईओ एक एसईओ रणनीति हो जुन स्थानीय व्यवसायहरूको अप्टिमाइजेसन प्रयासहरूमा जोड दिने कुरामा केन्द्रित छ। यसले अनुकूलन, सामग्री, अन-पेज अप्टिमाइजेसन, र फोकस गरिएको र स्थानीयकृत इरादाको साथ लि building्क निर्माण समावेश गर्दछ।
किन स्थानीय खोजी महत्त्वपूर्ण छ?
लगभग %०% व्यक्तिहरू जुन उनीहरूको मोबाइल फोनमा स्थानीय खोजी गर्छन् उनीहरू एक दिनको भौतिक स्टोरको अन्तमा जान्छन्।
कम्प्युटर वा ट्याब्लेटमा स्थानीय खोजी गर्ने of 34% प्रयोगकर्ताहरू पनि भौतिक स्टोरको भ्रमण गर्छन्।
१ mobile% स्थानीय मोबाइल खोजीहरूले एक दिन भित्र बिक्रीमा नेतृत्व दिन्छ।
Adults०% अमेरिकी वयस्कले उनीहरूको मोबाइल उपकरण र ट्याब्लेटमा स्थानीय उत्पादनहरू वा सेवाहरूको खोजी गर्दछ।
मोबाइल उपकरणहरूमा mobile०% स्थानीय-आधारित खोजहरूले स्थानीय व्यापार ठेगाना जस्ता चीजहरूका लागि खोजी गरिरहेका छन्।
स्थानीय-आधारित of%% खोजीले अफलाईन खरीदहरूमा रूपान्तरण गर्छ।
स्टोर आगन्तुकहरु को %१% तिनीहरूले भेट्न अघि स्टोर समीक्षा गर्न इन्टरनेट खोज भन्छन्।
स्थानीय एसईओ साना र मझौले व्यापारको लागि आवश्यक छ जुन अझै पनि क्षेत्रीय मापनमा काम गर्दछ। यसको मतलव यो एसईओ स्थानमा आधारमा स्थानीय खोजीहरूको लागि विशेष क्रममा लक्षित छ। यो रणनीति तपाइँको सेवा र उत्पादनलाई तपाइँको व्यापार वरिपरिको स्थानीय लीडमा मार्केटिंगमा निर्भर गर्दछ, त्यसकारण तपाइँलाई तपाइँको सीधा आसपासमा बेच्न मद्दत गर्दछ, र यसले तपाइँलाई ब्रान्ड निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको स्थानीय एसईओ अनुकूलनको मतलब अधिक वेबसाईट ट्राफिक, नेतृत्व र तपाईंको स्टोर र वेबसाइटमा रूपान्तरण हो किनभने यो रणनीति तपाईंको स्थानीय आधारित ग्राहकहरूको लागि अधिक प्रासंगिक छ।
स्थानीय एसईओ का महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू के के हुन्?
यसको वास्तविक रूप मा, स्थानीय SEO र दैनिक SEO सबै फरक छैन। दुबै प्रकारका एसईओमा किवर्ड रिसर्च, सामग्री, लि links्कहरू, र पृष्ठ-टेक्निकल एसईओ सामिल छन्। सब भन्दा महत्वपूर्ण भिन्नता भनेको ट्राफिक प्राप्त गर्न ठूलो नेट कास्टिंग गर्नुको सट्टा, स्थानीय एसईओले तपाईंको एसईओ प्रयासहरू केन्द्रित गर्दछ माछा मार्ने लाइनलाई स्थानीय क्षेत्रमा। यी तत्वहरू तपाइँको वेबसाइट र समग्रमा उद्योगको लागि सही हुन यो महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी जब तपाइँ SERP मा तपाइँको प्रतिस्पर्धाको प्रदर्शन गर्ने आशा गर्नुहुन्छ।
जहाँसम्म, तपाईको स्थानीय खोजीका लागि अनुकूलन गर्दा, हामीले पहिले उल्लेख गरेका अंशहरूमा स्थानीय फोकस छ। तिनीहरू विश्वव्यापी रूपमा अनुकूलनको लागि प्रयोग नभई व्यक्तिको विशेष समूहको लागि प्रयोग गरिन्छ। यस तत्वले तपाइँको वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्ने प्रयोगकर्ता र सम्भावित ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न केन्द्रित गर्दछ जुन तपाइँको व्यापारसँग नजिक छ।
तपाईको स्थानीय एसईओ ठीकसँग कार्य गर्नका लागि हामीले यी तत्वहरूको उल्लेख मात्र गर्नुपर्दैन। तपाईंले बुझ्नु पर्छ प्रत्येकको कति महत्त्वपूर्ण छ र तपाईंले ती कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर बुझ्नु आवश्यक छ।
स्थानीय एसईओ मा, कुञ्जी खोज अनुसन्धानले कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छैन। जहाँसम्म त्यहाँ क्षेत्रहरू छन् जहाँ केहि समायोजनहरू गर्नु आवश्यक छ, यदि तपाईं नियमित कुञ्जी खोज अनुसन्धानको साथ महान हुनुहुन्छ भने, स्थानीय एसईओ कीवर्ड अनुसन्धान केही एलियन हुनेछैन।
तथ्या .्क स collected्कलनबाट, हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो समकालीन युगमा, व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा स्मार्ट उपकरणहरूको बृद्धि हुँदै गइरहेको छ। आज प्रायः सबैजनासँग एक वा स्मार्टफोनको एक संयोजन, गुगल होम, वा अमेजन इको छ। यी उपकरणहरूले खोज सुविधालाई क्रान्तिकारी गरेका छन किनकि उनीहरू आवाज सक्रिय खोजीका लागि सक्षम छन्, जसले स्थानीय स्टोरहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ। स्पष्ट भिन्नताका साथ हामी विश्वास गर्छौं कि प्रायजसो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको लागि उहि वाक्यांश टाइप गर्नु भन्दा "मेरो नजिकको एक स्थानीय स्टोर खोज्नुहोस्" भन्नु सजिलो र अधिक सुविधाजनक छ। यसैले, यी उपकरणहरू घरमा राख्नु भनेको कुराकानी आवाज खोजीमा आधारित स्थानीय प्रश्नहरूमा वृद्धि भएको छ।
सेवा उन्मुख व्यवसायका लागि कुञ्जी खोज अनुसन्धानले धेरै कुञ्जी शब्द भिन्नताहरू समावेश गर्नुपर्दछ जुन तपाईंले कुराकानी खोजी ईन्पुटमा अपेक्षा गर्नुपर्नेछ। धेरै उपकरणहरू जस्तै किवर्ड.आइयो वा उत्तरपब्लिकको प्रयोग गरेर, तपाईले प्रश्नहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ जुन मानिसहरूलाई तपाईले प्रदान गर्ने सेवाहरू सोध्नु पर्छ। यसले तपाईंलाई अधिक उपयुक्त उत्तरहरू डिजाइन गर्न मद्दत गर्दछ साथै तपाईंको वेबपृष्ठहरूका लागि अनुकूलित हेडिingsहरू।
एक स्थानीय ईंट-र-मोर्टार व्यवसाय वा सेवा-सम्बन्धी व्यवसायको रूपमा, तपाईको साइटमा आएको ट्राफिकको मात्रामा कत्ति भिन्नता देखेर तपाईं स्तब्ध हुनुहुनेछ, कुराकानी टोन र तपाईंले प्रयोग गर्नु भएको कुञ्जी शब्दहरूको फोकसलाई धन्यवाद। तपाईले तपाईको कुञ्जी शब्द सही तरीकाले अनुसन्धान गरेपछि मात्र यो सम्भव छ।
तपाइँको कुञ्जी शव्दहरू ठाउँमा राखिसकेपछि, अब त्यस्तो सामग्री सिर्जना गर्ने समय छ जुन तपाईंको व्यवसायलाई वर्णन गर्दछ र प्रयोगकर्ताहरूले सोध्ने प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ। कुञ्जी शब्दहरू क्रमबद्ध गर्नमा उत्कृष्ट उपकरण हो, तर यो केवल एक चरण हो। अर्को चरण भनेको अचम्मको सामग्री प्राप्त गर्नु हो जुन तपाईंको पाठकहरूलाई विश्वस्त पार्छ कि तपाईं सबैभन्दा उत्तम उपलब्ध समाधान हुनुहुन्छ। यो तपाइँको सामग्री को लागी धन्यवाद छ कि तपाइँ एक स्थानीय स्तर मा तपाइँको दर्शकहरु संग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको सामग्रीलाई स्थानीय भाषामा डिजाईन गरेर, स्थानीय वाक्यांशहरूको साथ, र एक स्थानीय ठेगाना भएकोले, दर्शकहरूलाई थाहा छ कि उनीहरू तपाइँमाथि भरोसा गर्न सकिन्छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईं योग्य सामग्री प्रदान गर्नुहोस्। स्थानीय रूपमा एक महान रिसोर्टको लागि खोजी गर्दा, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सामग्री तपाईंको दर्शकहरूको प्रश्नहरूको उत्तर दिन पर्याप्त छ।
विकिपीडिया प्रकारका सामग्री लेख्नु भनेको तपाईको स्थानीय एसईओ प्रयासका लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा नराम्रो कुरा हुन सक्छ। विकिपीडिया प्रकारका सामग्रीहरू द्वारा, हामी त्यस्तो सामग्रीलाई सन्दर्भ गर्छौं जसले राष्ट्रिय राजमार्ग ट्राफिक सुरक्षा प्रशासन वा सामग्री सार्वभौमिक हो।
स्थानीय एसईओ लिंक
यो सम्भवत एउटा क्षेत्र हो जुन स्थानीय एसईओ र नियमित एसईओ बीच सब भन्दा स्पष्ट भिन्नता रहेको छ। सबैभन्दा पहिले, तपाइँ कुनै पनि लिंकमा पुग्नु भन्दा पहिले, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई गुगलको वेबमास्टर दिशानिर्देशनहरूलाई विचार गर्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ ताकि तपाईको वेबपृष्ठहरुमा लिंक थपे पछि तपाईले गुगलबाट कुनै पनि सजाय भोग्नु हुँदैन।
स्थानीय एसईओ मा, विभिन्न लिंक कोटिहरू सँगै आउँछ एक गुणवत्ता स्थानीय एसईओ लिंक प्रोफाइल बनाउन। तिनीहरू समावेश:
उद्धरण/NAP साइटहरु: तपाईले यी साइटहरुलाई तपाईको स्थानीय खोज उपस्थिति बढाउन भुक्तान गर्नुहुन्छ, र ती सामान्यतया NAP केन्द्रित छन्। NAP मतलब, ठेगाना, र फोन नम्बर।
स्थानीय निर्देशिका वेबसाइटहरू: स्थानीय डाइरेक्टरीहरूमा लिंकहरू निर्माण गर्दा तपाईंलाई स्थानीय खोजीहरूको लागि तपाईंको वेबसाइटको लिंक अधिकार बढाउन मद्दत गर्दछ।
उद्योग-सम्बन्धित स्थानीय साइटहरू: कुनै पनि स्थानीय वेबसाइट सोच्नुहोस् कि स्थानीय लिंक निर्माण अवसरहरू प्रदान गर्न इच्छुक जस्तै अखबारहरू, स्कूलहरू, विश्वविद्यालयहरू, र सरकारी संघहरू।
स्थानीय साझेदार साइटहरू: यसले सामान्यतया तपाईंको व्यवसायको स्थानीय साझेदारहरू समावेश गर्दछ। गुगलले अत्यधिक लिंक एक्सचेन्जमा फ्राउन्स गर्दछ तर तपाईंको वेबसाइटमा केही चीजहरू राख्नु खराब कुरा होइन।
स्थानीय एसईओ को भविष्य
हालको तथ्या .्क, डेटा, र प्रवृत्तिले हामीलाई देखाउँदछ कि स्थानीय एसईओ उल्लेखनीय सुधारिएको सन्दर्भ र समझ मा एक प्रतिमान शिफ्ट को लागी छ। स्मार्ट उपकरणको विकासको साथ, त्यहाँ एक प्रवृत्ति छ कि खोजी अधिक कुराकानी-जस्तो बन्न र स्थानीय समाधान गर्न निर्देशन। यो पनि सुझाव दिन सक्दछ कि यी उपकरणहरूले पहिलेदेखि नै राम्रो SEO को प्रयासको साथ स्थानीय स्टोरहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछन्।
गुगल निरन्तर यसको एल्गोरिदम समायोजन र अपडेट गर्नाले भविष्य धेरै हदसम्म अज्ञात हुन्छ। यद्यपि हामी आशावादी छौं कि यसले स्थानीय खोजीको दक्षता र महत्वमा सुधार ल्याउँछ। एक मध्यम मापन वा सानो व्यापार को रूपमा, यो एक अद्वितीय अवसर प्रस्तुत गर्दछ जहाँ तपाईं अन्य ठूला साइटहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन, र तपाईंको सफलताको लागि सम्भावनाहरू सुधार गरिएको छ। स्थानीय र विश्वव्यापी दुबैमा राम्रो गर्न तपाईंको वेबसाइटलाई अनुकूलन गरेर, तपाईंको वेबसाईट राम्रो छन, र तपाईं ट्राफिक र बिक्रीमा स्पष्ट वृद्धि देख्नुहुनेछ।
Semalt तपाइँको व्यापार बढ्न सहयोग गर्न समर्पित छ। तपाईको अगाडि, हामी तपाईको वेबसाईटलाई स्थानीय खोजीका लागि अप्टिमाइज गर्न सक्दछौं जसले तपाईलाई राम्रो गर्न र बढ्न अनुमति दिँदछ। आज हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस् र स्थानीय एसईओको फाइदाहरूको आनन्द लिन सुरू गर्नुहोस्।